Iibso Small on November 26 |
Iibso Small on November 26
Saturday, November 26, 2016 waa Small Business Saturday® - maalin ay u dabaal iyo taageero ganacsiyada yaryar oo dhan waxay u sameeyaan bulshooyinkooda. Fadlan ku soo biir SBDC ah, SBA iyo ururada guud ahaan dalka ee taageeraya ganacsiga yaryar ee degaankaaga by adeeganayay ee ganacsi yar yar.
Calaamadso taarikhda, hadda ay sannadkii lixaad, Small Business Saturday (November 26) waa maalin halkaas dukaan wax kasta qayb ka mid ah ka ciyaari kara si ay u taageeraan dhaqaalaha degaanka iyo milkiilayaasha ganacsiga yar yar kuwaas oo bixiya intooda badan oo ka mid ah kobaca dhaqaalaha. Maamulaha Maria Contreras-Sweet, madaxa laga xoreeyo dalka ah. Maamulka Ganacsiga yaryar iyo xubin ka mid ah Madaxweyne Obama ayaa Golaha Wasiirada, sameeyey bayaankan soo socda:
"Fadlan ku biiri laga xoreeyo dalka ah. Maamulka Ganacsiga yaryar ee taageeraya America ee ganacsiga iyo ganacsade yar oo bulshada ka qayb lixaad sannadlaha ah 'Small Business Saturday' iyo dhiiri macaamiisha American si 'dukaanka yar'. Small Business Saturday kaalin muhiim ah ka wadista gaadiidka macaamiisha iyo dakhliga kordhaya our 28 million ganacsi madax-bannaan lagu jiro xilli tafaariiqda fasax muhiim ah. Waxaan sidoo kale dhiirri-macaamiisha in ay 'la cuno yar' by dilis qaniinyada a at eatery maxalli ah.
"By adeeganayay maxalliga ah iyo kuwa yar yar inta badan ee lacagta joogo bulshada dhexdeeda. milkiilayaasha ganacsiga yar yar iyo shirkadaha Main Street yihiin dhar ah ee nolol maalmeedkeena. Waxay leeyihiin tamarta iyo rabitaankiisa waxa ay samaynayaan,, oo markii aannu taageero ganacsiga yar yar, shaqooyin loo abuuray iyo bulshooyinka degaanka ilaashadaan dhaqan u gaar ah. SBA wuxuu bixiyaa milkiilayaasha ganacsiga yaryar inay helaan adeegyo la-talin, caasimada si ay u koraan ama ay ganacsi bilaabaan, oo xiriir ah in ay suuqa federaalka iyo sahaydu shirkadaha. In ka badan wax, ganacsatada, kuwaas oo sidoo kale u baahan macaamiisha. Small Business Saturday sidoo kale waxay na siisaa fursad ay ku sharaf iyo dabaal ragga kar ah oo dumarka la abuuro shaqooyin iyo hurinta dhaqaalaha xaafadaha ay maxalliga ah. "
entry Tani waxaa posted Khamiista, October 20, 2016 at 10:39 ahay oo la soo gudbiyay hoos Blog, Entrepreneurship. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.